सहयोग सम्झौता | Law & More | आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डम
प्रत्येक उद्यमी वा निजी व्यक्ति सहयोग सम्झौताको स्थापना संग सम्झौता गर्न को लागी छ। सम्झौताको सामग्री होसियारीपूर्वक निर्धारण गर्नुपर्दछ। सम्झौता कोर्नु भनेको विशेषज्ञहरूको लागि कार्य हो। जे भए पनि, व्यवहारमा प्राय: यस्तो हुन्छ कि सबै विवरणहरू ध्यानपूर्वक सोच्दैनन्। एक मानक सहयोग समझौता खोज्नको लागि र अनलाइन डाउनलोड गर्न सजिलो छ। यस्तो मानक सम्झौता सस्तो र द्रुत समाधान जस्तो देखिन्छ, तर यो छैन। पहिले नै राम्रो मनसाय र सम्झौताको बाबजुद पनि, प्रायः त्यस्ता सम्झौताको खंडहरू देखिन्छन् जुन अस्पष्ट वा पछि बहुविध व्याख्याहरूको लागि खुला छ।
यसैले विशेष सहयोग सम्झौताको वकिलबाट सल्लाह लिन आवश्यक छ। यसले भविष्यमा अस्पष्टता र महँगो प्रक्रियाहरूलाई रोक्दछ। हामी तपाईंलाई वार्ताको बखत तपाईंलाई सल्लाह दिन सक्छौं र, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्। के तपाई सल्लाहमा इच्छुक हुनुहुन्छ? कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
एक सहयोग सम्झौताको व्याख्या, एक सम्झौता सही तरिकाले पूरा भइरहेको छ कि भनेर प्रश्न र एक सम्झौताको दोषपूर्ण पूर्ति को परिणाम दैनिक विषयहरू छन्। एक सहयोग सम्झौताको एक विशेषता हो Law & More.
के तपाईंलाई सहयोग सम्झौता बनाउन सहयोग चाहिन्छ? के सम्झौताहरू पूर्ण छैनन् र के तपाईं सहयोग समाप्त गर्न चाहानुहुन्छ? वा तपाइँसँग सम्झौताको परिणामको रूपमा झगडा छ? यी प्रश्नहरू हुन् जुन हाम्रो सहयोग सम्झौता वकीलहरू तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछन्। हामीसँग सबै आवश्यक ज्ञान छ तपाईलाई सबै भन्दा राम्रो सम्भव समाधान प्रदान गर्नका लागि।
शीर्षकहरू द्वारा ह्यान्डल Law & More's वकिलहरु समावेश:
मस्यौदा बनाउने र स्थायी र अस्थायी सम्झौताको मूल्यांकन;
सम्झौताको अन्त्य (समाप्ति, विघटन, रद्द);
एक सहमति सम्झौताको पालना नगरेमा अर्को पार्टीलाई डिफल्टमा राख्दै;
सम्झौताबाट उत्पन्न हुने विवादहरूको सामना गर्ने;
सहयोग सम्झौताको सामग्रीमा कुराकानी गर्दै।
Law & More यसको सेवाहरूको क्षेत्र र प्रकृति सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो। यसको मतलव यो छ कि राष्ट्रिय सहयोग सम्झौताको अतिरिक्त हाम्रो ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई लागू कानून र नियमहरू र कानुनी सर्तहरूको सही अनुवादको बारेमा थप ध्यान आवश्यक छ। हामी पनि सफल सुरुवातको साथ उनीहरूलाई मद्दत गरेर स्टार्ट-अपको लागि सक्रिय छौं।
एक सहमति सम्झौता ड्राफ्ट
सहयोग सम्झौताको क्षेत्रका विशेषज्ञको रूपमा, हामीलाई सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न वा निगरानी गर्न आमन्त्रित गरिन्छ। तल तपाईले केहि उदाहरणहरू पाउनुहुनेछ:
सामान्य नियम र सर्तहरू;
भाडा र पट्टि सम्झौताहरू;
पैसा loanण सम्झौताहरू;
भवन निर्माण सम्झौता;
खरीद र बिक्री सम्झौताहरू;
यदि तपाई भाडामा लिनुहुन्छ Law & More सहयोग सम्झौता बनाउनका लागि हामी तपाईसँग कुरा गर्नेछौं तपाईको इच्छा के हो भनेर जान्नका लागि। त्यसो भए हामी सम्भावनाहरूको छानबिन गर्नेछौं र तपाईका लागि सावधानीका साथ सम्झौता तयार गर्नेछौं।
हामी छिटो र सटीक काम गर्न प्रयोग गरीन्छौं र तपाईंले आफ्नो प्रश्नहरूको उत्तरको लागि लामो कुर्नु पर्दैन। के तपाईंलाई सहयोग सम्झौता बनाउन मद्दत चाहिन्छ? को सम्पर्क फारम भर्नुहोस् Law & More.